अब देखि निषे-धाज्ञा उल्ल’ङ्घन गरे एक वर्ष कै’द । – Yuwa Aawaj
अब देखि निषे-धाज्ञा उल्ल’ङ्घन गरे एक वर्ष कै’द ।
जेठ १२, २०७८ बुधबार 272
काठमाडाैं : जिल्ला प्रशासन कार्यालयले को’भिड–१९ सङ्क’ट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ क’डाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलबारदेखि नि’षेधाज्ञा उल्ल’ङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारीसाधनलाई का’रबाही गरिने भएको हो । निषेधा’ज्ञा उल्ल’ङ्घन गर्दा एक वर्ष कै’द, पाँच लाख रुपियाँसम्म जरि’वाना वा दुवै स’जाय हुनसक्ने नयाँ कानुनी प्रा’वधान छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले को’भिड–१९ नियन्त्र’णका लागि जारी निषे’धाज्ञा पालना नभएमा नगद ज’रिवाना तथा कै’द स’जाय दुवै हुन सक्ने बताए । यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
यता : झापामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १३८ जनामा कोरो’ना संक्र’मण पु’ष्टि भएको छ । आज संक्र’मण पु’ष्टि हुनेहरूमा पी’सीआरतर्फ ११८ जना र एन्टि’जेन परीक्ष’णबाट २०
जनामा संक्रम’ण पु’ष्टि स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ । यो सँगै झापामा कुल संक्र’मितको संख्या पीसीआ’रतर्फ ९ हजार ६३२ जना र एन्टि’जेन परी’क्षणबाट ६४६ जना पुगेको छ । आज ८१ जना को’रोना संक्रम’णमुक्त भएका छन् ।
यो सँगै कुल संक्र’मणमु’क्त हुनेको संख्या ५ हजार ५२८ रहेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा झापाका थप ७ जनाको मृ’त्यु भएको छ । योसंगै जिल्लामा कोरो’ना संक्र’मणबाट मृ’त्यु हुनेको कुल संख्या २२० पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
Prevअब मर्निङ र इभिनिङ वाकका लागि घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने !
Nextबीएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिन डा.केसीको माग ।
रबि लामिछानेले निःशुल्क उप’चार गर्दै आएको ,जनमै’त्री अस्पताललाई कोरिया बाट अढाई लाख सहयोग ।
बधाई ! हजारौं भारतिय खेलाडीलाई पछि पार्दै किरण चेम्जोङ बने आई लिगको ‘प्लेयर अफ द मन्थ’ ।
हार्दिक बधाई ! नेपालमा आज एकैदिन ६५४३ जना संक्र-मित काे’राेना मुक्त ।